Politika momba ny tsiambaratelo - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Zava-dehibe aminay ny fiainanao manokana. Ny tetikady Global Campaign for Peace Education dia ny fanajana ny fiainanao manokana momba izay fampahalalana azonay angonina avy aminao manerana ny tranokalanay, www.peace-ed-campaign.org.
Daty mahomby: Enga anie 25, 2018
Ny fampielezan-kevitra eran-tany ho an'ny fandriam-pahalemana momba ny fandriam-pahalemana ("us", "we", na "our") dia miasa amin'ny tranokala Peace-ed-campaign.org (ny "Serivisy").
Ity pejy ity dia mampahafantatra anao momba ny politikantsika momba ny fanangonana, ny fampiasana ary ny famoahana ny angon-drakitra manokana rehefa mampiasa ny Service nou sy ny safidy nifandraisanao tamin'ny angona.
Mampiasa ny angon-drakitrao izahay hanomezana sy hanatsarana ny serivisy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy dia manaiky ny fanangonana sy ny fampiasana fampahalalana mifanaraka amin'ity politika ity ianao. Raha tsy voafaritra mazava ao anatin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity, ny teny ampiasaina ao amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia manana dikany mitovy amin'ny Terms sy Conditions azontsika, azo idirana avy amin'ny pcdnetwork.org
Ny serivisy dia ny tranokala Peace-ed-campaign.org tantanan'ny Global Campaign for Peace Education
Ny Data Usage dia angon-drakitra voaangona avy amin'ny fampiasana ny Service na avy amin'ny foto-drafitr'asa fanompoana (ohatra, ny faharetan'ny pejy fitsidihana pejy).
Cookies dia singa vitsivitsy voatahiry ao amin'ny fitaovana (ordinatera na fitaovana finday).
Data Processors (na mpanome tolotra)
Data Processor (na mpanome tolotra amin'ny serivisy) dia midika hoe olona voajanahary na ara-dalàna izay mandrindra ny angon-drakitra amin'ny anaran'ny Data Controller.
Azontsika ampiasaina ireo serivisy enti-manompo samihafa mba ahafahantsika manatsara kokoa ny angon-drakitrao.
Manangona karazana fampahalalana maromaro izahay amin'ny tanjona samihafa mba hanomezana sy hanatsarana ny tolotrasa ho anareo.
Fampiasana angona ho an'ireo mpitsidika tranonkala
Rehefa mametraka hevitra ao amin'ilay tranokala ny mpitsidika dia manangona ny angona aseho amin'ny endrika fanehoan-kevitra izahay, ary koa ny adiresy IP an'ny mpitsidika sy ny tadin'ny mpampiasa solosaina hanampiana ny fikarohana ny spam. Azon'ny mpampiasa atao koa ny misafidy ny handefa hevitra amin'ny alàlan'ny kaonty media sosialy. Azafady mba jereo ny sehatra media sosialy momba ny politikany manokana.
Ho an'ireo mpizara Newsletter
Raha efa nisoratra anarana tamin'ny bilaoginay ianao na raha mpikambana ao amin'ny tranokalanay (afaka miditra ianao) dia mety tsara ny handraisanao mailaka avy aminay.
Handefa anao mailaka fotsiny ianao izay nosoniavinanao horaisina, na izay mifandraika amin'ny serivisy nomenay anao.
Handefa mailaka aminao izahay dia mampiasa ny anarana sy adiresy mailaka omenao anay. Ny tranonkalantsika koa dia mampiditra ny adiresy IP nampiasanao rehefa nanao sonia ny serivisy ianao hisorohana ny fanararaotana ny rafitra.
Ity tranonkala ity dia afaka mandefa mailaka amin'ny alàlan'ny serivisy fandefasana Send Grid. Ity serivisy ity dia ahafahantsika manara-maso ny fisokafana ary tsindrio ny mailaka anay. Ampiasainay ity fampahalalana ity hanatsarana ny atin'ny taratasim-baovao. Azafady mba jereo ny politika momba ny fiainana manokana an'i Grid: https://sendgrid.com/policies/privacy/
Tsy misy fampahalalana azo hamarinina raha tsy any ivelan'ity tranonkala ity afa-tsy ny adiresy mailaka.
Firenena misy ny toerana
Mety hiala ianao ny fahazoana, na rehetra, ireo fifandraisana avy aminay ireo amin'ny fotoana rehetra aorian'ny fanarahana ny rohy tsy misy famandrihana na torolàlana omena amin'ny mailaka alefanay na amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminay amin'ny [email voaaro]
Security Cookies. Mampiasa cookies ho an'ny fiarovana isika.
Global Campaign for Peace Education dia mampiasa ny angona nangonina ho an'ny tanjona maro:
Manome fanampiana ny mpampiasa
Hanangona fanadihadiana na fampahalalana manan-danja mba hahafahantsika manatsara ny fanompoana
Mba hanomezana anao vaovao, loharano ary fampahalalana momba ny hetsika (rehefa manaiky ny hisoratra anarana amin'ny takelaka ianao) raha tsy nisafidy ny tsy handray vaovao toy izany ianao. Azonao atao ny misafidy ny tsy handray na iza na iza amin'ireo fifandraisana ireo aminay amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy famandrihana na torolàlana omena amin'ny mailaka alefanay na amin'ny fifandraisana aminay. [email voaaro]
Fototra ara-dalàna amin'ny fikirakirana ny angon-drakitra manokana araky ny lalàna momba ny fiarovana ny angona ankapobeny (GDPR)
Raha avy any amin'ny faritra ara-toekarena eoropeanina (EEA) ianao, PCDNetwork, LLC fototra ara-dalàna amin'ny fanangonana sy fampiasana ny mombamomba anao manokana voalaza ao anatin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia miankina amin'ny angon-drakitra manokana angoninay sy ny sahan-kevitra manokana anangonana izany.
Ny fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana dia mety handamina ny angon-drakitrao manokana satria:
Ny fanodinana dia ho tombontsoantsika ara-dalàna ary tsy voafehin'ny zonao izany
Ho an'ny tanjon'ny fanodinana
Ny fampielezan-kevitra manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana dia hitazona ny angon-drakitrao manokana raha mbola ilaina izany amin'ny tanjona voalaza ao amin'ity Politikan'ny tsiambaratelo ity. Hotazoninay sy hampiasa ny angon-drakitrao manokana araka izay ilaina amin'ny fanajana ny adidinay ara-dalàna (ohatra, raha takiana izahay hitazona ny angon-drakitrao hanarahana ny lalàna mifandraika), hamaha ny fifanolanana ary hampihatra ny fifanarahana ara-dalàna sy ny politikantsika.
Ny fampielezan-kevitra eran-tany ho an'ny fandriam-pahalemana dia hihazona ny angon-drakitra fampiasana ho an'ny tanjona fanadihadiana anatiny. Ny data momba ny fampiasana dia voatazona mandritra ny fotoana fohy kokoa, afa-tsy rehefa ampiasaina hanamafisana ny fiarovana na hanatsarana ny fiasan'ny serivisinay ity angona ity, na adidinay ara-dalàna ny mitazona an'io angona io mandritra ny fotoana lava kokoa.
Raha any ivelan'i Etazonia ianao ary misafidy ny hanome fampahalalana aminay, dia tadidio fa mandefitra ny angon-drakitra izahay, anisan'izany ny Data Personnel, ho an'i Etazonia ary hikarakara izany any.
Ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana dia handray ny dingana rehetra ilaina mba hahazoana antoka fa voakarakara tsara ny angon-drakitrao ary mifanaraka amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ary tsy misy famindrana ny angona manokana hataonao amin'ny fikambanana na firenena iray raha tsy misy fanaraha-maso sahaza ao anatin'izany ny fiarovana ny angon-drakitrao sy ny mombamomba anao manokana.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana dia mety takiana amin'ny famoahana ny angon-drakitrao manokana raha takian'ny lalàna izany na amin'ny valin'ny fangatahana manan-kery ataon'ny manampahefana (ohatra tribonaly na masoivohon'ny governemanta).
Ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana dia mety hampiharihary ny angonao manokana amin'ny finoana tsara fa ilaina ny hetsika toy izany:
Miaro sy miaro ny zon'ny na fananan'ny The Global Campaign for Peace Education
Ny zonao hiarovana ny angon-drakitra eo ambany fifehezana ny data General Protection (GDPR)
Raha mponina ao amin'ny faritra ara-toekarena eoropeanina ianao (EEA) dia manana zon'ny fiarovana angon-drakitra vitsivitsy ianao. Ny Global Campaign for Peace Education dia mikendry ny handray fepetra mety hamela anao hanitsy, hanitsy, hamafa, na hametra ny fampiasana ny angon-drakitrao manokana .
Raha te hampahafantarina anao ny momba ny angon-drakitry ny tenanay mihazona anao izahay ary raha tianao esorina amin'ny rafitray izany, mifandraisa aminay [email voaaro]
Amin'ny toe-javatra sasany, manana zo amam-piarovana ianao:
Ny zo hidirana, hanavao na hamafa ny fampahalalana ananantsika. Isaky ny azo atao dia azonao atao ny miditra, manavao na mangataka ny famafana ny angon-drakitrao manokana amin'ny alàlan'ny rohy omena ao amin'ireo taratasinao voasoratra. Raha tsy vitanao ny manao ireo fihetsika ireo dia miangavy anao hifandray aminay hanampy anao amin'ny
Ny zo hanarina. Azonao atao ny manitsy ny fampahalalana azonao raha tsy marina na tsy ampy ny fampahalalana.
Ny zo hanonerana. Azonao atao ny manohitra ny fanitsiana ny Daty manokana anao.
Zo ny famerana. Manan-jo hangataka izahay hametra ny fampahalalana ny mombamomba anao manokana.
Ny zon'ny mpiasa Manan-jo hanome anao ny dika mitovy amin'ny fampahalalana ananantsika amin'ny rafitra, endrika mora vakina ary ampiasaina matetika.
Ny zo hanajanona ny fanekena. Azonao atao ihany koa ny manaisotra ny fanekenao amin'ny fotoana rehetra iankinan'ny PCDNetwork, LLC ny fanekenao hanodinana ny mombamomba anao manokana.
Manana zo hitaraina amin'ny manam-pahefana momba ny fiarovana momba ny fanangonana sy ny fampiasana ny Daty manokana ianao. Raha mila fanazavana bebe kokoa, mifandraisa amin'ny tompon-tany momba ny fiarovana anao ao amin'ny faritra ara-toekarena Eoropeana (EEA).
Google Analytics dia serivisy fanaovana fanadihadiana an-tranonkala natolotry ny Google izay manara-maso sy mitatitra ny fivezivezena amin'ny tranokala. Google dia mampiasa ny angona nangonina hanarahana sy hanaraha-maso ny fampiasana ny Serivisy anay. Ity data ity dia zaraina amin'ny serivisy Google hafa.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba fiainana manokana an'ny Google dia tsidiho azafady ny pejin-tranonkala Google Privacy Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Izahay dia manangona soa aman-tsara ny fanomezana avy amin'ny tranonkalantsika amin'ny alàlan'ny serivisy antoko fahatelo amin'ny fikirakirana ny fandoavam-bola (ohatra mpikirakira fandoavam-bola).
Tsy hanangona na hanangona ny antsipirian'ny karatry ny karatra izahay. Io fampahalalana io dia omena mivantana amin'ireo processeurs fandoavam-bola ataon'ireo antoko fahatany izay mampiasa ny fampahalalana manokana momba anao manokana dia tarihan'ny politikan'ny fiarovana azy ireo. Ireo processeurs fandoavam-bola ireo dia manaraka ny fenitra napetraky ny PCI-DSS araka ny fitantanana ny PCI Security Standards Council, izay ezaka iombonana amin'ny marika toy ny Visa, Mastercard, American Express ary Discover. Ny fepetra PCI-DSS dia manampy amin'ny fiarovana ny fampandehanana ny fampindramana.
Ny processeurs miasa miaraka aminay dia:
Azonao jerena ao amin'ny https://go.wepay.com/privacy-policy
Ny fanompoana ataontsika dia tsy miresaka amin'iza na iza na iza ao anatin'ny taona 18 ("Ankizy").
Tsy voatery ho fantatry ny rehetra fa mety hamoaka vaovao azo fantarina avy amin'ny olon-drehetra ny taona 18. Raha ray aman-dreny na mpiambina ianao ary fantatrao fa nomen'ny Zanaka antsika ny Data manokana, azafady mba mifandraisa aminay. Raha mahatsikaritra isika fa nanangona tahiry manokana avy amin'ireo ankizy tsy misy fanamarinana ny faneken'ny ray aman-dreny, dia manao dingana isika mba hanesorana izany fampahalalana amin'ny servery izany.
Amin'ny fitsidihana ity pejy ity amin'ny tranokalanay: https://www.peace-ed-campaign.org/contact/